Akanakisa Manipulator Ane Mhepo Shaft Mugadziri uye Fekitori |Tongli
Manipulator Ane Mhepo Shaft
Rigid ruokomanipulators yakagadzirwayemaoko akaoma.Panyaya ye torsion resistance,sekuti workpiece haina kurongeka kana workpiece inoda kupepetwa,it anogona kushandisa cheterigidruoko manipulator.
Iyo mhepo yekuwedzera shaft manipulator chishandiso chakakosha chekupeta, shaft yekuwedzera, shaft yekuwedzera, inflatable roller, inflatable shaft, pressure shaft uye zvimwe zvishandiso.
Mhepo yekuwedzera shaft ine huwandu hwakasiyana hwekushandisa: chero muchina une rewinding, unwinding, uye slitting inogona kushandiswa kumhepo yekuwedzera shafts.
Inokodzera kudhinda michina: Exposure muchina, flexo printing machine, gravure machine, trademark printing machine zvichingodaro.
Inokodzera mimwe michina yemuchina: muchina wekupotera, muchina wedehwe, muchina wekugadzika, muchina wekumisa, muchina wekutsemura, muchina wekucheka, muchina wekudzosera kumashure, muchina wekudzosera, muchina webepa, muchina wekuisa, muchina wekugezera, Firimu inofuridza muchina, muchina unopupa furo, muchina wekuisa. , embossing muchina, pepa muchina, isiri-yakarukwa muchina, machira ekuongorora muchina, inopisa chitambi muchina, midziyo yebhatiri nemimwe michina ine hukama inotsigira kushandiswa.
Iyo yakaoma-ruoko rudzi simba-inobatsira manipulator inflatable shaft (air shaft yekubata manipulator) ine mazita akawanda, asi misimboti yekushanda yakafanana.Iyo inflatable shaft uye iyo inflatable sleeve zviri nyore uye nekukurumidza kushandisa.Iwe unongoda kugadzirira yako wega sosi yemhepo, uye kudzvanywa kwemhepo kunodzorwa pa6 Mukati meiyo -8kg / cm2, apo zvikamu zvekunze (senge denderedzwa pepa tube) zvinoda kuvharwa, pfuti yemhepo inogona kukwizwa. kumhepo yemhepo pane inflatable shaft, uye zvikamu zvekunze (senge denderedzwa mapepa tube) zvinogona kukwidziridzwa.Tube), kana wada kusunungura bepa rekuburitsa, unogona kuiburitsa nekutsikirira chikamu chekunze chinotsvedza (sechubhu yepepa redenderedzwa) pamhepo neruoko rwako.
Iyo inflatable shaft ye-hard-arm-power-assisted manipulator (iyo inflatable shaft yekubata manipulator) iri nani kudarika general inflatable shaft, nokuti shaft yose haifaniri kubudiswa kune imwe neimwe yekudzikisa.Izvo zvinhu zvinogona kubviswa mushure mekunyungudika zvakananga, nekuti hupamhi hwayo hahuna hukuru, saka kushanda kwechisikigo kuri nyore.Iyi zvakare inflatable shaft yakasarudzwa nemichina yakawanda ine uremu huremu uye hudiki hudiki., Chero bedzi iyo inflatable mubato wakaputirwa pamusoro pemhepo yemhepo pane inflatable shaft, iyo yepamusoro inotsvedza yemhepo core inogona kuderedzwa, uye kiyi bar ichadzokera kune yayo yekutanga kutaridzika.
Zvakapfuura: Gantry Manipulator
Zvinotevera: Manipulator NeClamp
Manipulator Aine Suction Cup